Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveLatin America | Zvazvino Zvinyorwa
Alberto Makumbo | | Vanyori, Mabhuku, dzakawanda
Zvinyorwa zveLatin America zvakagara zvichimiririra izvo zvemashiripiti uye zvakasarudzika zvemavara. Ichitsanangurwa zvakanyanya neinonzi "Latin American boom" yema60 iyo yakawana mumiriri wayo mukuru mune zvemashiripiti, rimwe divi redziva rinowana mune idzi Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveLatin America kune vamiririri vakanakisa kana zvasvika pakufungisisa mune izvo nyaya dzevanhu vakarasika, vatambi vakasarudzika uye kushoropodzwa kwezvematongerwo enyika.
1 Nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekusuwa, naPablo Neruda
2 Pedro Páramo, naJuan Rulfo
5 Humambo hwenyika ino, naAlejo Carpentier
6 Hopscotch, naJulio Cortázar
7 Iyo mbudzi pati, naMario Vargas Llosa
8 Semvura yechokoreti, naLaura Esquivel
9 Hupenyu hunoshamisa hupfupi hwa Óscar Wao, naJunot Díaz
10 2666, naRoberto Bolaño
Gabriel García Márquez akati nezvake kuti yaive «nyanduri mukurusa wezana ramakumi maviri«, Uye nenguva, tinotenda kuti haana kukanganisa. Akazvarwa muChile, Neruda rakaburitsa iyi nhetembo makumi maviri dzerudo uye rwiyo rwekusuwa rine makore gumi nemapfumbamwe chete kushandisa zvisingaenzanisike ndima yeAlexandria uye achiisa chiratidzo chake cherudo, kufa kana hunhu mundima. Nokusingaperi ramba uri mazwi ake uye hupenyu hwakagwinha hwe 1963 Mubayiro weNobel muMabhuku.
Mushure mekuburitswa kweseti yekutanga yenyaya dzinodaidzwa kuti El llanero en llamas, wekuMexico Juan Rulfo akabatsira kuisa hwaro hwe mashiripiti echokwadi nekuda kwerino bhuku rekutanga rakaburitswa muna 1955. Akagara muComala, guta riri murenje reColima, kuMexico, Pedro Páramo anopindura zita rababa avo Juan Preciado akasvika achitsvaga nzvimbo yakanyarara. Rimwe remabhuku echiLatin America anotengeswa zvakanyanya munhoroondo, zvakare, nhoroondo yenguva, iyo yemakore mushure meMushanduko weMexico.
Akafuridzirwa nebasa raRulfo, Gabo akatanga kukwira kwekusika muma50 zvaizoguma nekuburitswa (uye kubudirira) muna 1967 zveMamwe Makore Makore Ega Ega, Zvichida iro rine simba kwazvo kuLatin America basa remuzana ramakore rechiXNUMX. Mafupa ekondinendi seSouth America akatorwa kuburikidza nesitampu yemashiripiti yeMacondo, guta reColombia uko mhuri yaBuendía uye avo mazera akasiyana vakashandira kutaura nyaya dzechishuwo, kutonga uye shanduko zvinotsanangura imwe ye zvinyorwa zvine simba kwazvo zvezvinyorwa zvepasirese.
Yakabudiswa muna 1982, Isabel Allende yekutanga bhuku, munyori akatama kubva kwaakaberekerwa Chile panguva yeudzvanyiriri hwayo hweropa, akazova mutengesi uye pachiitiko chekugadziriswa kwemafirimu kwakaburitswa muna 1994. yehupenyu uye nhamo yezvizvarwa zvina zvemhuri yeTrueba munguva dzekutambudzika dzekupfuura-colonial Chile. Hunhu vane fungidziro, kutengesa uye kudanana zvinotsanangura Chile iyo munyori akaedza kuburitsa mune mazhinji emabasa ake.
Humambo hwenyika ino, naAlejo Carpentier
Humambo hwenyika ino: 2...
Mushure memakore akati wandei muEurope, Carpentier akaisa muhombodo yake simba rekufungidzira kwakaburitswa paakasvika kuCuba kwake uye mhemberero dzevoodoo dzeHaiti yaive padhuze dzakakurudzira kuvapo iyo chaiyo-inoshamisa, zano rekuti kunyangwe richiita semashiripiti, asi rakasiyana. Uchapupu hweiyi inyaya inotaurirwa kwatiri muHumambo hweNyika ino, nyaya yakaiswa muHaiti yekoloni inoonekwa kuburikidza nemeso emuranda Ti Noél uye ichokwadi iko kusangana kusingatarisirwi uye kwemasimba nehupenyu hwezuva nezuva hwenyika isina kururama. .
Hopscotch, naJulio Cortázar
Inofungidzirwa nevazhinji se «antinovel«, Kana« contranovela »zvinoenderana naCortázar iye, Hopscotch anoendesa mitambo yekare yehucheche kumapeji ebhuku mune mashiripiti, rudo uye akasiyana fomu fomu yekurarisa. Nepo kutsanangura zano reHopscotch kuri (kuda) kusingakwanise kupihwa chimiro chayo chakasarudzika uye maitiro akasiyana siyana, imwe yeanonyorwa ekutanga surrealist mumabhuku eArgentina, anotevera tsoka dzaHoracio Oliveira kuburikidza neye cosmos iyo Cortázar yakanga yave kuzadza pasi pezita reMandala. Pfungwa iyi yaigara iri yekutorera muverengi zvombo.
Iyo mbudzi pati, naMario Vargas Llosa
Mutambo wembudzi ...
Kunyangwe munyori wePeruvia -Spanish aine zvinopfuura makumi maviri zvemhando yepamusoro zvinoshanda kuchikwereti chake, La fiesta del chivo inotsungirira nekuda kwehunhu hwayo uye nebasa rakanaka remunyori apo paanotizivisa kune chimwe chezvikamu zvezvematongerwo enyika zvakasviba muLatin America: hudzvanyiriri hwaRafael Leónidas Trujillo muDominican Republic. Yakakamurwa kuita nhatu nyaya uye maviri akasiyana maonero, runyorwa rwakaburitswa muna2000 runotaura nezve simba rekutonga rakagadziriswa nevarume vakakandwa kushark, vasikana vakafukidzwa nesimba kana nyota yekutsiva mushure mekurangana kwekuuraya mu1961.
Apo mashiripiti echokwadi airatidzika kunge akachinjika mumazaya matsva, wekuMexico Laura Esquivel akasvika aine bhuku rine budiriro rakashandisa zvakanakisa zvigadzirwa kuti nyika iwire murudo: Nyaya isingaite yerudo, protagonist inotungamirwa nemhuri yekubika uye yechinyakare uye yechimurenga Mexico uko kufungidzira uye chokwadi zvakagara zvakaenzana. Kukunda kukuru.
Hupenyu hunoshamisa hupfupi hwa Óscar Wao, naJunot Díaz
Hupenyu hupfupi hunoshamisa ...
Mukati mezana ramakumi maviri nemasere, mazhinji emabasa akanakisa echiLatin America akauya achibva kuUnited States kuzotivhenekesa neicho chokwadi chevari kunze kwenyika. Muenzaniso wakanakisa ndewomunyori Junot Díaz nebhuku rake The Wonderful Brief Life raEscar Ivo, iro rinobata nezve hupenyu hwemhuri yeDominican yakavambwa muNew Jersey uye, kunyanya, wechidiki nerd uyo vasikana vaisada uye zhizha muSanto Domingo vaive zaruriro yakaipa. Yakabudiswa muna 2007, bhuku rakakunda Pulitzer Prize uye yakashongedzwa korona # 1 muThe New York Times kwemavhiki akati wandei.
2666, naRoberto Bolaño
Pashure kufa kwemunyori weChile Roberto Bolaño muna 2003, riwaya rakakamurwa muzvikamu zvishanu rakarongwa senzira yekuraramisa mhuri yemunyori. Chekupedzisira, vese vakaburitswa mubhuku rimwe chete rakaiswa mune yekunyepedzera guta reMexico reSanta Teresa, inogona kudaro Guta reJuarez. Vakabatana nekupondwa kwevakadzi vakasiyana siyana, 2666, semamwe mabasa akadai seThe Savage Detective, akashandira shandura munyori kuita ngano uye simbisa shanduko yedzimwe tsamba dzeSpanish mune yenyasha.
Ndeapi ari akanakisa mabhuku eLatin American zvinyorwa kwauri?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Mabhuku akanakisa ezvinyorwa zveLatin America
Oscar Hernandez akadaro
Kungotsanangudzwa kudiki, i "Iyo Pani Inopisa" kwete iyo "Iyo Llanero ..."
Pindura kuna Oscar Hernández
Maria scott akadaro
Ndingafarire kuve neruzivo rwekuti ndonotenga kupi mabhuku muPhoenix Arizona
Pindura kuna Maria Scott
Mhoro Maria Scott. Unogona kutenga mabhuku muamazon, ndipo paunowana vanyori vanoverengeka veLatin America kungave muChirungu kana Spanish. Kwaziso.
Scott bennett akadaro
Ndatenda nekugovana runyorwa. Pablo Neruda akahwina mubairo weNobel weMabhuku muna 1971, kwete 1963.
Pindura kuna Scott Bennett
Montserrat Moreno akadaro
Octavio Paz, Carlos Fuentes naGaleano havapo… ..
Pindura monserrat moreno
Julius Gallegos akadaro
«Kukurukurirana muKathedral» naMario Vargas Llosa….
Iwe wapotsa chirimwa changu cheorenji-lime uye bhuku reGaleano
Martha Palacios akadaro
Zvakanaka kurudziro! Ini ndaizowedzera runyorwa ruchangobva kuburitswa: "Kutsvoda chete ndiko kunovhara miromo yedu" nemunyori weArgentina Hernán Sánchez Barros. Iyo chaiyo inoshamisa nhoroondo yenhema.
Pindura kuna Marta Palacios
Hapana kubva kuna Octavio Paz kana Carlos Fuentes?
Hazvina musoro kuti Junot Díaz anonyora muChirungu anoonekwa pane akanyorwa uye hapana maBrazil, maHaiti, nezvimwe. Latin America ingangoita dudziro yemitauro: Spanish, French, Portuguese of America. Kuva mwanakomana weDominican kana weBrazil hazviite iwe Latin America.